ပုံမှန်ခရစ်ယန်အသက်တာ | Calvary Burmese Church
သူတို့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးများဟာ သဘောင်္ဆိပ်ကမ်းကို ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ဖို့လာကြတဲ့အခါ သူတို့ချစ်တဲ့ သည်လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကို တသက်လုံးပြန်ဆုံချင်မှ ဆုံဖြစ်တော့မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ တင်းကြပ်ဆို့နင့် တဲ့ခံစားချက်ကိုယ်စီနဲ့ နောက်ဆုံးသောနှုတ်ဆက်ခြင်း အနေနဲ့ နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းမှာ မျက်ရည်စက်လက်ငိုကြွေးနေတဲ့ မိခင်နှစ်ဦး အိမ်သူသက်ထားနဲ့ သားသမီးများရဲ့ငိုကြွေးသံများကြား တရွေ့ရွေ့ထွက်ခွါသွားတဲ့ ရွက်သဘောင်္က လူငယ်တစ်ဦးထံမှ တစ်သက်လုံးအတွက် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံကတော့ “အသက်စတေးခံ သွားတဲ့ သိုးသူငယ်က နာကြင်စွာပေးဆပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက် ဆုလဒ်များရရှိနိုင်ပါစေ”။ သူဟာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သဘောင်္ပေါ်မတက်ခင်အထိ ဇနီးသည်နဲ့ သားသမီးများထံမှ ခရီးစဉ်ကိုမသွားဖို့ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ အသနားခံ တောင်းဆိုခြင်းများကြားမှ ခရစ်တော်အတွက် မီရှင်ခရီးကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သည်အဖြစ်အပျက်ကလေးကို အခြေခံပြီး မိုရေးဗီးယန်းလူမျိုးတွေဟာ ကမ္ဘာအနှံ့မီရှင်နရီ များစေလွှတ်လာ ခဲ့တာ ယနေ့ အယောက်ပေါင်း မှတ်တမ်းအရ ၂၁၅၈ ဦး ရှိပါပြီ။
ချစ်သောမိတ်ဆွေ Normal Christian Life ဆိုဒါဘာလည်း? ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတစ်ခုတော့ တွေးမိမှာပါ….. ဒီဟာတော့ ပုံမှန်ခရစ်ယာန်အသက်တာ မဟုတ်ဘူးလို့လေ… ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျွန်အဖြစ်ရောင်းချတယ်… ဘ၀တစ်ခုလုံးကိုစွန့်ပစ်၊ ထားခဲ့တယ်…နှလုံးကွဲလုမတတ် ခံစားကြေကွဲ နေတဲ့ဇနီး သားသမီးများကို ပစ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါဆိုရင် ပုံမှန်ခရစ်ယာန်အသက်တာ (Normal Christian Life) ဆိုဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလည်း ?။
မာကု ၈း၃၄ တွင် “ထိုအခါ တပည့်တော်တို့နှင့် ပရိတ်သတ်များကို ခေါ်တော်မူပြီးလျှင်၊ အကြင်သူသည် ငါ၌ဆည်းကပ် ခြင်းငှါ အလိုရှိ၏၊ ထိုသူသည် ကိုယ်ကိုကိုယ်ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်း၍ငါ့နောက်သို့ လိုက်ရမည်။” ဟုဖော်ပြထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အဆိုအရ မိမိ၏အခွင့်အရေး၊ ရပိုင်ခွင့်များကိုပင်စွန့်ခွါ ငြင်းပယ်၍၊ သခင်ယေရှု စေခိုင်းချက်အတိုင်းလိုက်လျှောက်သောသူ သည် ပုံမှန်ခရစ်ယာန်တစ်ဦး၏ အသက်တာကို လိုက်လျှောက်သောသူ ပင်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် မိမိ၏အသက်တာကို သခင်ယေရှုလက်သို့ လုံးဝအကြွင်းမဲ့ အပ်နှံဆက်ကပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုထံ မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို အကြွင်းမဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံသောသူ တစ်ယောက်ကို သမ္မာကျမ်းစာ၌ တွေ့ရ၏။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက သခင်ယေရှုထံ အကြွင်းမဲ့အပ်နှံခြင်း နှင့်ပတ်သက်သောအချက် (၅) ချက်ကို ဖိလိပ္ပိ ၃း၇-၁၆ တွင် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းထားသည်။
၁။ အရာခပ်သိမ်း ရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ထင်မှတ်၏
အပိုဒ်ငယ် (၇-၁၀) တွင် “သို့သော်လည်း ငါ၏အကျိုးစီပွါးကို ပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကို ရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ ခရစ်တော် ကြောင့်ငါထင်မှတ်၏။ ထိုမျှမကငါ၏ သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိသော ပညာသည်အဘယ်မျှလောက်မြတ်သည်ကို ထောက်၍၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ ငါထင်မှတ်၏ “ ဟုဖော်ပြထားသည်။ ရှင်ပေါလုက သူ ရရှိသည် (အမြတ်ရသည်) ဟုထင်ခဲ့သမျှအားလုံး သခင်ယေရှုထံ အကြွင်းမဲ့ အပ်နှံပြီးနောက်ပိုင်း အရှုံးများချည်းသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သူဘာတွေ ရရှိခဲ့ပြီး အမြတ်ထွက်ခဲ့သည်ဟုထင်သလဲဟုစဉ်းစားစရာရှိသည်။
အထက်တွင် အပိုဒ် ငယ် ၄ – ၇ ကိုဖတ်ကြည့်လျှင် “သို့သော်လည်း ငါဖြစ်လျှင် ဇာတိ၌ကိုးစားစရာ အကြောင်းရှိ၏။ အခြားသူမည်သည်ကား၊ ဇာတိ၌ကိုးစားစရာ အကြောင်းရှိသည်ဟု ထင်လျှင်၊ ငါမူကားသာ၍ရှိ၏။ ငါသည်ရှစ်ရက် မြောက်သောနေ့၌အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံရ၏။ ဣသရေလအမျိုး၊ ဗင်္ယာမိန်အနွှယ်ဖြစ်၏။ ဟေဗြဲလူမှဆင်းသက်သော ဟေဗြဲလူစစ်ဖြစ်၏။ တရားအားဖြင့် ဖာရိရှဲဖြစ်၏။ စိတ်အားကြီးခြင်းကို မေးသော်၊ ငါသည်အသင်းတော်ကို ညှဉ်းဆဲ သောသူဖြစ်၏။ ပညတ်တရား အားဖြင့် ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မေးပြန်သော်၊ ငါသည်အပြစ်တင်ခွင့် နှင့်ကင်းလွတ် သောသူဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း ငါ၏အကျိုးစီပွါးကို ပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကို ရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ ခရစ်တော် ကြောင့်ငါထင်မှတ်၏” ဟုရေးသားထားသည်။ ယေရှုခရစ်တော်ထံ အကြွင်းမဲ့အပ်နှံခြင်း မပြုခင် သူ၏ဘ၀သည် အောင်မြင်ခြင်း၊ အမျိုးအနွယ်နှင့် ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းခြင်းအရာ အားဖြင့်ဝါကြွားခြင်းများရှိခဲ့ပြီး ဇာတိသဘောအားဖြင့် ကြည့်လျှင် အလွန်အားရစရာ၊ အားကျစရာကောင်းသော သူဖြစ်သည်။ သို့သော်ယေရှုကို လက်ခံသောအချိန်မှစ၍ ထိုအရာအားလုံးကို ရှုံးစေသောအရာ များဖြစ်သွားသည်။ မိတ်ဆွေရဲ့ဘ၀မှာ ဇာတိသဘောအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် ကျေနပ်အားရ သောအောင်မြင်မှုများ၊ ချမ်းသာမှုများ၊ ကြော်ကြားမှုများ ရရှိခံစားဖူးပါသလား ? ထိုအရာများသည် သခင်ယေရှုအားဖြင့် ရရှိသော အောင်မြင်ခြင်း၊ ရရှိခြင်းများဟုတ် မဟုတ်စမ်းစစ်ကြည့်ပါ။
၂။ သခင်ယေရှုကို သိသောပညာ
အပိုဒ် ၁၀ တွင် “ ထိုမျှမကငါ၏ သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိသော ပညာသည်အဘယ်မျှလောက်မြတ်သည်ကို ထောက်၍၊…..” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှု ကို နက်နက်နဲနဲ အကျွမ်းတ၀င် သိရှိနားလည်၊ သဘောပေါက်ခြင်း ကိုဆိုလိုသည်။ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များသာမက၊ မယုံကြည်သူ သာသနာပ လူများပင် သခင်ယေရှု အကြောင်းကို သိကြသည်။ သို့သော် သိရှိယုံ လောက်နှင့် မလုံလောက်ပါ။ သခင်ယေရှုအကြောင်းကို အပ်ကျသည်အထိ နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိရှိသူတစ်ယောက်သည် သိရှိယုံမက နားလည်၊ ကျွမ်းဝင်၊ လက်ခံ လိုက်လျှောက်သောသူ တစ်ယောက်က ရရှိသော “သခင်ယေရှုကိုသိသောပညာ” အကြောင်းကို မည်သို့မျှ နားမလည်နိုင်ပါ။ မိတ်ဆွေ… သခင်ယေရှုကို နားလည်ယုံနားလည်သူမဟုတ်ဘဲ.. “သခင်ယေရှုကို သိသော ပညာ” ကို သင်ကြားရရှိသောသူဖြစ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
အပိုဒ်ငယ် ၁၀ – ၁၁ တွင် “သေခြင်းမှထမြောက်သောအခွင့်ကို ငါရနိုင်ကောင်းလျှင်၊ ကိုယ်တော်သည် အသေခံတော်မူသည် နည်းတူ၊ ငါသည်လည်း အသေခံ၍…….” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဧဖက် ၁း၁၉-၂၀ တွင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “ယုံကြည်သောငါတို့၌ ပြတော်မူသော အလွန်ကြီး လှစွာသော တန်ခိုးတော်ကား အဘယ်မျှလောက် ကြီးသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့သည် သိစေခြင်းငှါ၊ သင်တို့၏ဥာဏ် မျက်စိကို လင်းစေပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပဌနာပြု၏။ ထိုတန်ခိုးတော်ကား၊ ခရစ်တော်ကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူ၍ ခရစ်တော်၌ ပြုပြင်သော မဟာတန်ခိုးအာနုဘော်အရှိန်ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ …..” ဟုရေးသားထားသည်။
သခင်ယေရှုသည် သင်၏အပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်သူ ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အရှင်သခင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် သင်သည်လည်း ထိုသခင်နှင့် အတူဘ၀ဟောင်းသေပြီး အသက်တာသစ် (ဘ၀သစ်) ကိုလျှောက်လှမ်းသောသူဖြစ်ရပေမည်။
အပိုဒ် ၁၀- ၁၁ တွင်ပင် “ကိုယ်တော်သည် အသေခံတော်မူသည် နည်းတူ၊ ငါသည်လည်း အသေခံ၍ ထိုသခင်ကို၎င်း၊ ထမြောက်တော်မူခြင်း၏ တန်ခိုးကို၎င်း၊ ဆင်းရဲခံတော်မူခြင်းကို ဆက်ဆံ၍ ခံခြင်းကို၎င်း….” ဟုရေးသားထားသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက သခင်ယေရှုအသေခံသည့်နည်းတူ သူသည်လည်း အသေခံ၍….ဟူ၍ ၄င်း သခင်ယေရှု ဆင်းရဲခံတော်မူခြင်းအတိုင်း သူလည်းဆင်းရဲဒုက္ခခံ ၍ သခင့်နောက်သို့ လိုက်လျှောက်မည့်အကြောင်း ဖော်ပြထားဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို အကြွင်းမဲ့ အပ်နှံလက်ခံသောသူသည် မိမိ၏ဘ၀ အသက်တာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သခင့်အတွက်ဆိုလျှင် တနည်းမဟုတ် တနည်း ပေးဆပ်နိုင်ရမည်။ ပေးဆပ်သောသူဖြစ်ရမည်။
ပုံဥပမာတစ်ခုဖော်ပြလိုသည်။ တစ်ခါက သူဌေးတစ်ယောက်က နေစရာမရှိသော လူငယ်နှစ်ယောက်ကို သနားသောအားဖြင့် သူ၏အိမ်တွင်နေစရာအခန်း တစ်ခုစီပေးထားသည်။ တစ်ယောက်သောသူက သူဌေးကိုကျေးဇူးတင် သဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများ တတ်နိုင်သရွေ့ကူလုပ်ပေးသည်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသည်။ ဒုတိယ လူငယ်ကတော့ ပျင်းရိစွာဖြင့် နေ့တိုင်းအိပ်လိုက် စားလိုက်နှင့် အချိန်ကုန်စေခဲ့သည်။ မည်သည့် အိမ်မှုကိစ္စကိုမျှ ကူညီဖော်မရ။ ပထမလူငယ်သည် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးသောကြောင့် ထိုအိမ်တွင်နေထိုင်ခွင့် ရရှိခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ ဒုတိယလူငယ်သည်လည်း ကူညီလုပ်ကိုင်ဖော် မရသော်လည်း ထိုအိမ်တွင် သနားခြင်း ဂရုဏာအားဖြင့် ထိုအိမ်တွင် နေထိုင်ခွင့် ရပါသည်။ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေအား ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူဌေးကြီး နေရာတွင်ထားပြီး ထိုလူငယ်နှစ်ဦးကို သုံးသတ်စေလိုပါသည်။ မိတ်ဆွေ အနေနှင့် မည်သည့် လူငယ်ကို ပို၍ကြိုက်နှစ်သက်ပါမည်နည်း။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ပေးဆပ်ခြင်းမလိုအပ်သော်လည်း ပုံမှန်ခရစ်ယာန်အသက်တာ မှာသခင်ယေရှုအတွက်ပေးဆပ်ခြင်းရှိသင့်ပါတယ်။
၅။ ပန်းတုံးတိုင်ရောက်သည်အထိပြေးခြင်း၊ အပြေးပြိုင်ပွဲ။
အပိုဒ်ငယ် ၁၂ ၏ အဆုံးတွင် “. . . ထိုအကျိုးကို ကိုင်မိခြင်းငှါ ငါပြေး၍လိုက်သေး၏” . အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် အပြေးသမား တစ်ယောက်သည်
(၃) နောက်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အရာများကိုထားခဲ့ (သို့) မေ့ ထားခြင်း
(၄) ရှေ့သို့ပြေးခြင်း စသည်တို့ကိုလိုအပ်သည်။
မိတ်ဆွေ ပုံမှန် ခရစ်ယာန်အသက်တာသည်လည်း အပြေးပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော အပြေးသမား တစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သော ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုသည်မှာ သင်ဘယ်လောက်သိရှိနားလည်သည် ဆိုသည့် အချက်အပေါ်တွင်မမူတည်ဘဲ၊ သင်၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင် ခရစ်တော်အတွက် ဘယ်မျှလောက် အာရုံစူးစိုက်၊ ပေးဆပ် ပြီး ဘ၀ပြေးလမ်းအပေါ်မှာ ရှေ့သို့ ပုံမှန်အပြေးချီတက်နေသလဲ ဆိုတဲ့အချက်အပေါ် ပိုပြီး တည်ပါတယ်။
အောက်ကအချက်ကလေးတွေကို ဖတ်ပြီး မိတ်ဆွေရဲ့ ဘ၀ဟာ မှန်ကန်သော ခရစ်ယာန်အသက်တာ အပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေသူ ဟုတ်မဟုတ် ပြန်လည်သုံးသတ်စေလိုပါတယ်။
– သခင်ယေရှုကို သင်နဲ့အတူ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာအတူသွား၊ အတူလာ၊ အတူစား ဖို့ ခေါ်ဖိတ်ဖူးပါသလား ? သင့်ရဲ့ အပြစ်တွေ အားလုံးကို ခွင့်လွတ်ဖို့ တောင်းပန်ပြီး သင့်ရဲ့ အနာဂတ်ကို လည်းလမ်းပြပို့ဆောင်ဖို့ ခေါ်ဖိတ်ဘူးပါသလား
– သင့်ရဲ့ ခရစ်ယာန်အသက်တာဟာ သာမန်အဆင့်နိမ့် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ တစ်ယောက်လား၊ ခရစ်တော်အတွက်ပေးဆပ်တဲ့ သစ္စာရှိငယ်သားကောင်း ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်လား။
– နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သမ္မာကျမ်းစာ ဖတ်ပြီးဆုတောင်းတဲ့ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်လား
မှတ်ချက် Phil Morgan ၏ တရားဟောချက် (The Normal Christian Life) ကို ကိုးကားပါသည်။
This entry was posted on January 7, 2011 by thawngno in Articles Christian Life, Thawngno and tagged Thawngno.